Pirezidantiin duraanii Yaman Alii Abdullaah Saalah 'ajjeefaman' - BBC News Afaan Oromoo
Pirezidantiin duraanii Yaman Alii Abdullaah Saalah 'ajjeefaman'
Goodayyaa suuraa Alii Abdulaah Saalah erga waraanni bara 2015tti Yamaniitti egaleen booda michuu Haawutii ta'an
Gabaasawwan Yaman irraa argaman akka jedhanitti, pirezidantiin duraanii Yaman Alii Abdullaah Saalah osoo michoota isaa kan duraanii waliin wal waraanaa jiranu ajjeefaman.
TVn al-Maasiraah jedhamuufi Haawutiin to'atamu qondaa ministeera dhimma biyya keessaa yoo ''badiinsi milishoota goolii uumanii fi du'aatiin ogganaa isaanii kan dhumaatii' jechuun yoo ibsuu eeree jira.
Akka televijinii Al Arabiyaatti maddeen Paartii Kongirasii Ummataa waliigalaa gama isaaniitiin Saalah du'u isaanii mirkaneessaniiru,
Qaama biraa irraa mirkaneeffachuun danda'amu dhabullee suuraawwaniifi viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifamaa jiran reeffa fuula obbo Saalah fakkaatu agarsiisaa jiru.
Hanga torban darbeetti, deeggartoonni obbo Saalah Haawutii waliin mootummaa Yaman aangoorra jiru lolaa turan.
Haa ta'u malee, waldiiddaan siyaasaa fi waldhabdeen masjiida guddaa Sanaa riphee loltootaan qabamee jiruu to'achuurratti uumamee cimaa dhufuunsaa, walitti bu'insa hamaa Roobii galgala lubbuu namoota 125 galaafateefi kanneen 238 maddeesseef ka'umsa ta'eera.
Gaafa Sambataa Obbo Saalah qinsoomina waraanaa Saa'udii Arabiyaan hoogganamu waliin walii galuuf yaada kaa'an.
Pirezidantiin Yaman yeroo ammaa aangorra jiran Yaman miidhuu dhiisee fi daandii Yamanitti seensisu dhorkuu dhabe deeggaruu akka danda'an himani ture.
Saa'udiin Yaman seenuu dhorkuu ishiitin gargaarsa kennuun rakkoo ta'e
Yaada kana qindoominnii Saa'udiin hogganamuufi mootummaan biyyatti Abdurabbuh Mansuur Hadii deeggaranis jarri Haawutii garuu Obbo Saalah 'qindoomina takka dur hin amannetti' 'fonqolcha' taasisuufi jedhani himatan.
Erga qindoominni biyyootaa Saa'udiin hogganamu wal waraana Yaman gidduu seenee as lammiileen 8, 670 yeroo ajjeefaman 49, 960 kan ta'an immoo miidhamuu isaanii Mootummoonni Gamtoomani beeksiseera.
Waldhabdeeniifi daandiin Yamanitti seensisu mara Saa'udiitin torban sadiif cufamuun isaa lammiileen miiliyoona 20.7 gargaarsa nyaataaf akka saaxilaman taasiseera.
Lakkoofsi ummataa hammi kuni balaa akkanaaf yeroo saaxilamu kuni isa guddaadha.
Gargaarsa nyaataan alatti dhibee koleeraatin erga Ebilaati lammiileen Yaman 2, 211 akka du'an tilmaamama.
Anga'aan 'UN' tokko Yamanitti beelli haamaan mudachuu danda'a jechuun akeekkachiisan
9 Sadaasa 2017
Viidiyoo Daa'imni Yaman sun maal ta'e?
Walitti bu'insa Yaman: Saa'udii Yaman seenuu dhorkuun ishii gargaarsaaf' 'baay'ee rakkisaa' ta'e
8 Sadaasa 2017
'Rakkoo mana hidhaafi Labsii Yeroo Muddamaa kaasnee dubbanneera'
Fakkeenyummaa 'tokkummaa, jaalalaafi waldanda'uun jiraachuu': Naannoo Kibbaa
Galiin 'Facebook' dabalaa jira
Ijoolleen 'warshaa daa'imaa' keessaa baraarfaman
Irreechi Tulluu kabajamaa jira
Tuullaa reeffaa 'bara duguuggaa sanyii' Ruwaandaa
'Eeegduun Biin Laaden' Jarman jiraata jedhame
Dhimma nuukilaara Iraanirratti waa akeekaniiru
Dhaabni Oromiyaa bulchu Labsii Yeroo Muddamaa kaasuuf humna qabaa?